qarax ka dhacay afaafka hore ee Jaamacada Simad Magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Qarax loo maleynaayo inuu yahay miino aasneyd, ayaa wuxuu ka dhacay afaafka hore ee Jaamacada Simad Magaalada Muqdisho, gaar ahaan laanta ay Jaamacadaasi ku leedahay wadada Warshadaha.
Qaraxaan oo dhacay xalay, ayaa la sheegayaa inay ku dhaawacmeen labo ruux oo ku sugneyd afaafka hore ee Jaamacada Simad, lama sheegin khasaaro dhimasho oo ka dhashay qaraxaasi, kasokoow dhaawaca labadaasi ruux.
Waxaan la ogeyn sababta Qaraxa halkaasi loo geliyay iyo cida ka dambeysa, maadaama goobta qaraxa lagu aasay ay tahay afaafka hore ee Jaamacada Simad oo ah xarun waxbarasho oo dadka ay wax ku bartaan.
Dadka deegaanka ayaa sheegay inay mar qura maqleen jugta qaraxa, kadibna markii goobta ay ku soo yaaceen ay arkeen labo ruux oo dhaawac ah, kuwaasi oo durba meesha laga qaaday lana geeyay goobaha caafimaadka ee Magaalda Muqdisho.
Wadada Warshadaha ee Magaalada Muqdisho oo Jaamacada Simad ku taallo dhowr mar waxaa qaraxyo lagula eegtay gaadiidka ciidamada Dowladda Federalka Somalia ay wataan ee halkaasi mara.
Maamulka Jaamacada Simad weli kama aysan hadlin qaraxaan ka dhacay afaafka hore ee Jaamacada Simad ee Magaalada Muqdisho.
Jaamacada Simad horay waxaa looga dilay masuul ka tirsanaa Jaamacadaasi oo lagu magacaabi jiray Ibraahim Maxamuud Xaamud oo ahaa kaaliyaha Guddoomiye ku xigeenka Jaamacadaasi ee Arimaha Waxbarashada, waxaa la dilay 10-kii Bishii ugu dambeysay ee sanadkii 2014-ka.